Global Voices teny Malagasy » Noravan’ny Manampahefanan’i Skopje Ny Tranon’ireo Fianakaviana Roma’, Ary Tsy Noraharahiana Avy Eo Ny Manjò Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Septambra 2016 9:24 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Voina, Zon'olombelona
Ankizy Roma lasa tsy manan-kialofana taorian'ny fandrodanan'ny fiadidiana ny tanànan'i Skopje ny tranon'izy ireo. Sary avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Nandroaka fianakaviana Roma 31 ahitana ankizy tao amin'ny toeram-ponenana iray ambanin'ny Mandan'i Kale iray mandritra ny vanin-taona mafana Kale ny fiadidiana ny tanànan'i Skopje renivohitra ao Makedonia. Tsy vitany hoe noravan'ireo manam-pahefana ny tranon'izy ireo sivy taona farany fa voalaza ihany koa fa tsy nahazo fanohanana araka ny tokony ho izy ireo fianakaviana ireo.
Namoaka raki-tsary tao amin'ny Flickr ilay mpikatroka momba ny sary Vančo DžambaskiIn mba hisarihana ny saina mikasika ny manjo azy ireo. Namariparitra ny toe-javatra iainan'ny fianakaviana tao anatin'izany izy:
Tsy nisy fanampiana avy amin'ny andrim-panjakana, monina ao amin'ny toerana vonjimaika anilan'ny renirano Vardar izy ireo ankehitriny. Tsy misy herinaratra, famatsian-drano na fanariana rano maloto, ary atahorana ny areti-mifindra noho ny tondra-drano sy ny tsy fisian'ny fepetra ara-pahadiovana na dia kely aza, matahotra ny ririnina hoavy izy ireo.
Tamin'ny 2011, namidin'ny fanjakana taamin'ny orinasa tsy miankina, Amadeus Group tamin'ny vidiny teo amin'ny 100 dolara isaky ny metatra toradroa ny tany, izay tsara toerana tokoa. Minitra vitsy miala ny afovoan-tanànan'i Skopje no misy ny toerana, ary nilaza ireo tompony vaovao fa mikasa hanangana trano fandraisam-bahiny eo izy ireo.
Tsy mbola taitra amin'ny hetsi-panoherana ataon'ireo niharam-boina ny manampahefana hatramin'izao. Nasaina nifindra tao amin'ny vondrona tsy manan-kialofana ao amin'ny toby efa ratsy ao Čičino Selo ivelan'ny tanàna izy ireo, izay nolavin'ireo fianakaviana satria tery tsy omby azy rehetra , ary ratsy dia ratsy ny fari-piainana ao noho ny monina eny an-kalamanjana. Ny ankamaroan'ireo olona ireo dia mivelona amin'ny alalan'ny fanangonana tavoahangy plastika sy sakafo eny amin'ny fanariam-pako, izay taterin'izy ireo amin'ny bisikileta avy eo. Manohintohina tanteraka ny fahafahan'izy ireo manangona tavoahangy plastika ho amidy eny amin'ny orinasa mpanodina akoran-javatra ny halavirana, sy ny famindran-toerana ivelan'ny tanàna.
Asa mafy saingy marina. Loharanom-bola ho an'ireo Roma tsy manan-kialofana ny fanangonana tavoahangy plastika nariana eny amin'ny fako. Mampidi-doza ihany koa izany, satria misy vakina tavoahangy, singam-by sy tariby, ary fako isan-karazany misy poizina ihany koa ao amin'ny fako. Sary avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Nilaza ny tsy fisian'ny firaharahiana eo amin'ny governemanta sy ny fampahalalam-baovao ho mariky ny fanavakavahana mitohy atao amin'i Roma ao amin'ny fiarahamonina Makedoniana ireo mpikatroka sasany. Tamin'ny fanambarana ho an'ny Global Voices i Ljatife Sikovska, avy ao amin'ny Foibem-pampianarana Roma Ambrela , no nanazava ny maha zava-doza ny toe-javatra iainan'ny vondrona tsy manan-kialofana :
Noravan'ny fiadidian'ny Tanànan'i Skopje metropolitana ireo trano bongo tamin'ny 1 Aogositra, andro vitsivitsy monja talohan'ny oram-be mivatravatra izay niteraka tondra-drano nahafatesana olona vao haingana. Tsy nandray fepetra ny manampahefana mba hampiantranoana ireo olona 121 voakasika, izay ankizy ny 64. 2 volana ny zaza zandriny indrindra tamin'izany fotoana izany. Tafavoaka velona tamin'ny tafio-drivotra ratsy indrindra ambany tafo lanitra ireo tsy manan-kialofana, ary indrisy mbola tsy misy tafo eo ambonin'ny lohan'izy ireo hatramin'izao.
Nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana tsy miankina ireo Roma ireo teo anelanelan'izany. Nanome fitaovana mitentina eo amin'ny 4500 dolara eo ny Orina Mpanasoa Open Society – Macedonia  (FOSM) .
Ity fepetran'ny hamehana ity dia ahitana fanomezan-tsakafo sy rano fisotro, fitaovam-pidiovana, salaka ho an'ny ankizy ary vokatra fototra hafa ho an'ny fianakaviana Roma eo amin'ny 30 (eo amin'ny olona 130) izay tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao. Anisan'izany, ny olona tsy manana karampanondro, ny vehivavy bevohoka, ny olona marary sy ny ankizy. Ny tanjona tamin'ity asa notanterahan'ny FOSM tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Fikambanana Mpanohana ara-pahasalamana, ara-tsosialy ary ara-panabeazana antsoina hoe ” Fisantaran'andraikitra ho Fampandrosoana sy ny Fampidirana ny Vondrom-piarahamonina Maro” (IDIC) ity dia ny hamaly ny filàn'ireo olom-pirenena ireo raha mbola miandry ny andrim-panjakana hitady vahaolana maharitra amin'ny olana izy ireo.
Manohy mitaky amin'ny manam-pahefana, indrindra ny Minisiteran'ny Asa sy ny Politika ara-tsosialy ary ny Tanànan'i Skopje ny Fikambanan'ny Firaisamonim-pirenena fa tokony hanome trano ho an'ireo olona tsy manan-kialofana izy ireo alohan'ny hahatongavan'ny volan'ny hatsiaka izay mety hanampy trotraka ny fari-piainan'izy ireo efa ratsy. Ny fiainana ao amin'ny toby vonjimaika dia mitovy amin'ny toe-javatra voalaza aorian'ny apokalypsa mikasika ny loza voajanahary lehibe, toy ny horohorontany nandravarava.
Lehilahy mitsangana eo anoloan'ny trano lainy, 3 km miala ny kianja lehibe ao Skopje. Sary Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/17/88592/
 raki-tsary : https://www.flickr.com/photos/fosim/albums/72157672551688300
 hetsi-panoherana : http://novatv.mk/protest-na-romite-baraat-reshenie-za-kukite-od-kotse-trajanovski/
 tery tsy omby azy rehetra: http://www.radiomof.mk/romite-pod-kale-ni-na-nebo-ni-na-zemja/
 bisikileta : https://www.flickr.com/photos/fosim/29516076872/in/album-72157672551688300/
 fanavakavahana mitohy atao amin'i Roma : https://globalvoices.org/2011/05/02/macedonia-the-roma-inside-or-outside-the-circle/
 Foibem-pampianarana Roma Ambrela: http://www.ambrela.org.mk/
 tondra-drano nahafatesana olona : https://globalvoices.org/2016/08/12/despite-flood-devastation-the-macedonian-government-pours-millions-into-a-ferris-wheel/
 Orina Mpanasoa Open Society – Macedonia: http://fosm.mk/en/Home/NewsAndActivity?newsID=6138&catID=7